नेपाल एयरलाइन्सले ३७ हजार मै जापान उडाउने, लगेज पनि २५ किलो लान दिने ! « Etajakhabar
नेपाल एयरलाइन्सले ३७ हजार मै जापान उडाउने, लगेज पनि २५ किलो लान दिने !
प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७६, सोमबार २३:२५
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आगामी फागुन १९ गते (२ मार्च २०२०) देखि जापानको नारितामा सिधा उडान भर्ने भएको छ । निगमको एयरबस वाइड बडी जहाजमार्फत नारितामा साताको तीन दिन सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सिधा उडान प्रारम्भ गर्ने निगमले आज विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
निगमको जहाज बिहान १ः२५ बजे त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि उडान गरिने र सोही दिन अपरान्ह् ६ः२५ बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । हालका लागि प्रवद्र्धनात्मक भाडाडर काठमाडौँबाट नारिताका लागि एकतर्फी रु ३७ हजार र दुईतर्फी भाडा रु ७३ हजार निर्धारण गरिएको छ । यसका साथै विजनेस क्लासमा यात्रा गर्नेले प्रति व्यक्ति २५÷२५ किलोका दुई ब्यागेज र इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्नेले प्रतिव्यक्ति २३÷२३ किलोका दुई ब्यागेजको सुविधा पाउने छन् ।
नारिताको उडान प्रारम्भ भएपछि टोकियो र वरपरका यात्रुहरुलाई सुविधा हुनेछ भने सिधा उडानले ट्रान्जिटको झन्झट समाप्त हुनेछ । नारिता उडानका लागि यात्रुको उत्साहवद्र्धक बुकिङ भइरहेको निगमको वाणिज्य विभागले उल्लेख गरेको छ । मुख्य पर्यटकीय मौसम भएकाले पनि यात्रुको आवतजावत राम्रै हुने निगमको अपेक्षा छ ।
२१ श्रावण २०७७, बुधबार २०:५९
वीर अस्पतालमा शल्यकृया गर्न ठिक्क पारेको एक विरामीमा कोरोना पुष्टि
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १९:२८
अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै नेपाल बारे यस्तो भने मोदीले
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १८:२३